trip - Synonyms of trip | Antonyms of trip | Definition of trip | Example of trip | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for trip
Top 30 analogous words or synonyms for trip
အပျော်စီးသင်္ဘော အပျော်စီးသင်္ဘောများသည် များသောအားဖြင့် ခရီးသည်များအား စထွက်ရာ ဆိပ်ကမ်းသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်သည့် ရောင်းထရစ်ပ် (round trip) ခရီးစဉ်များကို ခုတ်မောင်းကြသည်။ သို့သော်လည်း ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီးများသည် ရောင်းထရစ်ပ်ခရီးစဉ်ထက် ခရီးသည်များအား တစ်နေရာမှ အခြားတစ်နေရာဆီသို့သာ ပို့ဆောင်ပေးသည်။ အချို့ သင်္ဘောများတွင် လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်သည့် ခရီးစဉ်များရှိသည်။
အပိုလို ၁၁ A second Sea King helicopter hoisted the astronauts aboard one by one, whereaNASA flight surgeon gave eachabrief physical check during the 0.5 nautical miles (930 m) trip back to the Hornet.
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း During the local summer of 1966–67, von Braun participated inafield trip to Antarctica, organized for him and several other members of top NASA management. The goal of the field trip was to determine whether the experience gained by US scientific and technological community during the exploration of Antarctic wastelands would be useful for the manned exploration of space. Von Braun was mainly interested in management of the scientific effort on Antarctic research stations, logistics, habitation and life support, and in using the barren Antarctic terrain like the glacial dry valleys to test the equipment that one day would be used to look for signs of life on Mars and other worlds.
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း While on an official trip in March, von Braun sufferedacomplicated fracture of his left arm and shoulder after his driver fell asleep at the wheel. His injuries were serious, but he insisted that his arm be set inacast so he could leave the hospital. Due to this neglect of the injury he had to be hospitalized againamonth later where his bones had to be re-broken and re-aligned.
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ With the configuration finalized, NASA turned its attention to mission profiles. Despite some controversy,alunar orbit rendezvous for the lunar module was chosen over an Earth orbital rendezvous. Issues such as type of fuel injections, the needed amount of fuel for suchatrip, and rocket manufacturing processes were ironed out, and the designs for the Saturn V were selected. The rocket was to be built in three sections from the bottom up: SI-C, S-II, and S-IVB. Each section was designed by von Braun in Huntsville and built by outside contractors such as Boeing, North American Aviation, Douglas Aircraft, and IBM.
စန်ကာကူကျွန်းအငြင်းပွားမှု According to Chinese claims, the islands, known to China at least since 1372, had been repeatedly referred to as part of Chinese territory since 1534, and later controlled by the Qing Dynasty along with Taiwan. The earliest written record of Diaoyutai dates back to 1403 inaChinese book Voyage with the Tail Wind (zh:順風相送), which recorded the names of the islands that voyagers had passed onatrip from Fujian to the Ryukyu Kingdom.
သိုင်းပညာ ယဉ်ကျေးမှုပို၍ရှေးကျသဖြင့် ယုတ္တိတန်ပေသည်။ တရုတ်သည် သိုင်းပညာ၏ ဖခင်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယပြည်သည် သိုင်းပညာ၏ မိခင်ဖြစ်သည် ဟု သုတေသီတို့က ပြောစမှတ် ပြုကြဟန်တူသည်။ Chinese martial arts is the most oldest of all martial arts and it is possible to trace its roots back more than 4,600 years. The earliest form of Chinese martial arts is those practised by soldiers for direct use in battlefield combat. (Chinese Martial Arts was already established in China with an extensive written and oral tradition when Bodhidharma arrived). The Master Bodhidharma wasaSouth Indian of the Western Region. He was the third son ofagreat Indian king. Buddhist monk Bodhidharma (as known as Daruma in Japanese and known as DaMo in Chinese) arrived in China about 520 A.D afterathree year trip from India.
Alternative dance Alternative dance အနုပညာရှင်များမှာ ဗြိတိသျှလူမျိုးများဖြစ်သည်။ UK ၏ အရေးပါသော club များမှ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ Underground ဂီတယဉ်ကျေးမှုတွင် rave ဂီတအဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ New Order တီးဝိုင်းသည် သူတို့၏ ၁၉၈၂-၈၃ recording များကြောင့် ဤအမျိုးအစား၏ ပထမဆုံးအုပ်စုအဖြစ် Allmusic က ကိုးကားခြင်းကို ခံရသည်။ ဤအမျိုးအစား၏ပထမဆုံးအုပ်စုအဖြစ် Allmusic က ကိုးကားခြင်းကို ခံရသည်။ ဤတီးဝိုင်းသည် ဂျာမနီတီးဝိုင်း Kraftwerk တီးဝိုင်း၏ post-punk နှင့် electro/synthpop ပုံစံများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ Alternative dance သည် ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းတွင် ၁၉၈၀တွင် ဗြိတိန်၏ Madchester ဖြစ်ရပ်နှင့် ၁၉၉၀တွင် trip hop နှင့် rave ဖြစ်ရပ်တွင် ထိတွေ့စေခဲ့သည်။ The Hacienda club သည် New Order တီးဝိုင်းဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဤအမျိုးအစားသည် ၁၉၈၀တွင် ဗြိတိန်၏ ဗဟိုကျသော အမျိုးအစားဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် Chicago မှ Liquid Soul အုပ်စုသည် San Francisco မှ Dubtribe အုပ်စုသို့ dance ဖြန့်ချိန်တွင် The Prodigy တီးဝိုင်းနှင့် The Chemical Brothers တီးဝိုင်းတို့သည် ၁၉၉၀ British Scene တွင် အရေးပါခဲ့သည်။ The Prodigy ၏ တတိယမြောက် Studio album "The Fat of the Land" သည် ထွက်ထွက်ခြင်းတွင် အမေရိကန်အပါအဝင် ၂၅ နိုင်ငံတွင် နံပါတ်တစ်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက် first international alternative dance hit ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပိုင်အိုနီးယား-၁၀ အာကာသယာဉ် The on-board experiments demonstratedadeficiency of particles belowa[[micrometer]] (μm) in the belt, as compared to the vicinity of the Earth. The density of dust particles between 10–100 μm did not vary significantly during the trip from the Earth to the outer edge of the belt. Only for particles withadiameter of 100 μm to 1.0 mm did the density show an increase, byafactor of three-fold in the region of the belt. No fragments larger thanamillimeter were observed in the belt, indicating these are likely rare; certainly much less common than anticipated. As the spacecraft did not collide with any particles of substantial size, it passed safely through the belt, emerging on the other side about February 15, 1973.
Glam metal ဖျတ်လတ်သော အဖြစ်အပျက်များသည် Sunset Strip မှ club များ ပါဝင်သည်။ Los Angele မှ The Trip, The WhiskyaGo Go နှင့် Starwood တို့ပါဝင်သည်။ U.S မှ Quiet Riot ၏ Metal Health (၁၉၈၃) ပထမဆုံး glam metal album ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု ပထမဆုံး heavy metal album သည် Billboard music charts တွင် နံပါတ် ၁ နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတီးဝိုင်းမှ mainstream အောင်မြင်မှု၏တံခါးဝသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ L.A မှတီးဝိုင်းများတိုးလာခြင်းသည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် album များထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ratt ၏ Out of the Cellor (၁၉၈၄) နှင့် W.A.S.P ၏ eponymous album တို့ ပါဝင်သည်။ Black ‘n Blue ကို Portland တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Oregon၏ eponymous debut album တို့ပါဝင်သည်။ New York အခြေစိုက် ဒိန်းမတ်တီးဝိုင်း White Lion တီးဝိုင်း၏ Fight to Survice( ၁၉၈၅) album ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် Motley Crue သည် သူတို့၏ “Theatre of Pain’’ album နှင့်အတူ glam metal သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထိုတီးဝိုင်းများသည် glam metal ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အရေးပါသော အပိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။